असफलताबाट उठेर कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ ? जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
सास फेरे जस्तै रहेछ कमाउनु र कमाएको पैसा समाजकै हितमा लगाउनु भनेको । जसरी हामी श्वास लिन्छाै तर श्वास फेर्दिन भनेर लामो समय रोकिराख्न सक्दैनौ । त्यसैगरि समाजवाट लिने तर, समाजलाई नदिने गर्न पनि सक्दैनौ । जसले गर्न खोज्छन्, ति उकुसमुकुस हुन्छन् श्वास रोकेसरी ।
भनिन्छ नि यदि मुठि कस्यो भने, हात भित्र भएको मात्र अडिने हो, तर, हात खूल्ला गर्नू भयो भने केही छैन भने पनि केही पर्न सक्छ, केही छ भने त अझै धेरै हुने नै भयो । यदि केहि पाउन तपाइ अघि बढ्न चाहनुहुन्छ तर कुनै विन्दुमा पुगेर असफल हुनु भयाे भने नअात्तिनुहाेस किनकि असफल हुनु भनेकाे त फेरि हामीले त्यस कामलाइ अझ राम्राे तरिकाले गर्ने अवसर पाएकाे हाे ।
अाज हामीले यहाँ असफलताबाट उठेर कसरी अगाडी बड्न सकिन्छ, भन्नेबारे एक जीवन उपयाेगी भिडियाे युट्युव च्यानल SAKARATMAK SOCH बाट साभार गरेका छाै ।
Don't Miss it यस्ता छन् मह र लसुन मिसाएर खानुका चमत्कारीक फाइदै फाइदा
Up Next ग्याष्ट्रिक के हो, किन हुन्छ ग्याष्ट्रिक, यदि ग्याष्ट्रिक भइहालेमा के खाने ? जानकारी लिनुहोस् !